नेपालमा कोराना भित्रिए कति संक्रमित होलान् ? यस्तो छ सरकारी अनुमान | Pennepal
Home समाचार नेपालमा कोराना भित्रिए कति संक्रमित होलान् ? यस्तो छ सरकारी अनुमान
नेपालमा कोराना भित्रिए कति संक्रमित होलान् ? यस्तो छ सरकारी अनुमान
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप देखिए महिनामा १५ सय नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। यसै अनुमानका आधारमा १५ सय संक्रमितलाई नै लक्षित गरेर कार्ययोजना बनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले कम र धेरै संक्रमण भएका मुलुकको अवस्था अध्ययन गरेर कार्ययोजना बनाएको बताए।
‘भियतनाम, श्रीलंका, थाइल्यान्डमा कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा बढेको छैन। तर, इटाली, इरान, दक्षिण कोरियामा एक्कासी बढेको छ। इटाली र इरानकै गतिमा नेपालमा कोरोना संक्रमण भयो भने पनि महिनामा १५ सय मात्रै संक्रमित हुन्छन्। यही आधारमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने। स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार १५ सय लक्षित कार्ययोजना नेपाल सरकार एक्लैले बनाएको होइन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लुएचओ०ले अन्य देशमा देखिएको संक्रमण अध्ययनका आधारमा नेपाललाई १५ सय केसका लागि तयार रहन आग्रह गरेको थियो। संक्रमित सबैलाई अस्पताल लान नपर्ने सरुवारोग विशेषज्ञहरु बताउँछन् । सरुवारोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनका अनुसार १५ सय संक्रमित हुँदा ८० प्रतिशत अर्थात १२ सय बिरामी अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाका हुँदैनन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र वृद्धवृद्धालनई मात्र समस्या हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
कोरोना प्रभावः चीनसँग ३२ प्रतिशत व्यापार घट्यो